Before you read this article, if you subscribe to the Rhona McCallum Hair email newsletter, make sure you check today's post for an extra special offer, just for you! We have already shared some of the hottest trends for hair colour
We love hair, we love cutting, colouring, curling, waving, braiding and styling, but we also love being able to add something special to your finished look that elevates it to a different level, that’s why we are stockist of the
Rhona Recommends: System Professional
If you are a Rhona McCallum Hair client, you will know that System Professional is one of our most popular product ranges. We have used, and trusted this brand for almost 30 years and continue to be amazed at the
The Rhona McCallum Hair Academy
We know the importance of spending time teaching & nurturing our young team, bringing out their confidence and helping them love their new career. Rhona & Florence are fully qualified trainers & assessors. At present training up their team Lucy, Madison,
Here at Rhona McCallum Hair we are here to help you get the very best from your hair and scalp. Our in-salon and at-home products have been carefully chosen to give you the very best ingredients and nutrients to maintain
The Rhona McCallum Hair VIP Club
Be a Rhona McCallum Hair web-shop VIP Here at Rhona McCallum Hair we recognise that sometimes you want to shop online, it’s convenient, it can be done at your leisure and every now and again we all like to have a